Xog: Weeraro Iyo Dagaalo Maanta Ka Kala Dhacay Gedo, Hiiraan Iyo Sh/dhexe. – Shabakadda Amiirnuur
January 9, 2018 11:00 am by admin Views: 117
Weeraro iyo dagaalo kala duwan oo sababay khasaare ayaa maanta ka kala dhacay sadax gobol oo kala ah Hiiraan, Gedo iyo Sh/dhexe.
Hiiraan haddaanu ku horreyno waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Xarakada Al-Shabaab iyo kuwa Xabashida Itoobiya kadib markii askarta Al-Shabaab ay dhabbaha u galeen kolonyo ciidamada Itoobiya ah.
Weerarka oo ka dhacay degaanka Ceel-gaal oo waayadii dambe la oranayay Ceel-muslim ayaa waxay wararka horudhaca ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya loogu geystay khasaare culus iyadoo gaadiidna laga gubay.
Sidoo kale waxaa gobolka Gedo ka dhacay weerar kale oo dhabba-gal ah oo ay ciidamada Xarakada Al-Shabaab u geysteen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen askarta Kenya.
Weerarkan oo ka dhacay inta u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Buusaar ayaa waxaa askarta Kenya looga gubay gaadi gaashaaman oo Beebe ah sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaa maanta ku dagaalamay labo ciidan oo ka wada tirsan askarta dowladda kuwaasoo iska dilay 5, tiro kalana iska dhaawacay, lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dagaalkan.